व्यक्तिगत विकास के हो - यसले कसरी तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
व्यक्तिगत विकास के हो - यसले कसरी तपाईंको जीवनलाई वास्तवमा परिवर्तन गर्न सक्दछ
पोस्ट व्यवस्थापक | अक्टोबर 18, 2018 | व्यक्तिगत विकास के हो, व्यक्तिगत विकास |0|
1 व्यक्तिगत विकास के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
2 तपाईंको लक्ष्य हासिल गर्न व्यक्तिगत विकास प्रयोग गर्दै
2.1 व्यक्तिगत विकास योजना के हो र तपाईंलाई व्यक्तिगत विकास योजना किन चाहिन्छ
3 आत्म सुधार र सकारात्मक सोच
3.1 व्यापार र क्यारियरको विकासमा व्यक्तिगत विकास के हो
केवल व्यक्तिगत विकास भनेको के हो र यसले तपाईंको जीवन कसरी परिवर्तन गर्न सक्दछ?
व्यक्तिगत विकासको अर्थ हामी सबैको लागि बिभिन्न चीज हुन्छ। पहिले वाक्यांश आफैलाई यो लाग्छ व्याख्या छैन जस्तो देखिन्छ?
जे होस्, जब तपाईं यसको बारेमा अधिक सोच्नुहुन्छ, यसले विभिन्न प्रकारका प्रकारहरू समावेश गर्दछ जुन अद्वितीय र विविध छ। एक सरल व्याख्या हुनेछ:
"बन्ने ब्यक्ति तपाई बन्न चाहानुहुन्छ।"
यसले सम्बन्ध, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत धन, क्यारियर, शिक्षा र सिकाई।
व्यक्तिगत विकास के हो र कयो यो हो महत्त्वपूर्ण?
"मलाई भनिएको छ कि पागलपनको क्लिनिकल परिभाषा भनेको एउटै कुरा बारम्बार गर्ने र विभिन्न नतीजाहरूको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति हो।"
व्यक्तिगत बृद्धिको मूल्यलाई हल्का ठोकिएन। हामी यसको सामना गरौं हामी सबै जन्मेको क्षण बाट बढ्न थाल्छौं र जीवनभर हाम्रो प्रगति जारी राख्दछौं।
कहिलेकाँही हामी अरूबाट पनि सिक्छौं। कहिलेकाँही हामीले आफ्नै लागि सिक्नु पर्छ। हामी जति बढी सिक्छौं, त्यति नै हाम्रो जीवनको नियन्त्रण हुन्छ। यसले हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र हाम्रो क्यारियर दुवैमा लागू गर्न सक्दछ।
व्यक्तिगत विकासको बारेमा महान कुरा यो हो कि यो सबै उमेरहरूको लागि हो। हामी सबै निरन्तर बढ्दै जान्छौं। हामी सबै राम्रो र सुधार गर्न चाहन्छौं।
व्यक्तिगत सुधार विधिहरूको यति धेरै पक्षहरू छन्:
समय व्यवस्थापन कौशल
न्यूरो-भाषिक प्रोग्रामिंग (NLP)
को सेवाहरू प्रयोग गर्दै व्यक्तिगत जीवन कोच
व्यक्तिगत विकासले तपाइँको साना बच्चाहरूलाई सानै उमेरदेखि माइन्डफुलनेसको बारेमा सिकाउन सक्छ। वा एक किशोरी / युवा वयस्क क्यारियर सल्लाह र मार्गदर्शनको लागि खोजी सफल भविष्यको लागि उत्तम विकल्पहरू बनाउनको लागि।
जीवनमा सबै कुरा पूर्ण हुँदैन। हामीले आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनको लागि चीजहरू चिन्न र त्यसमा कार्य गर्न सिक्नु आवश्यक छ।
के तपाईंसँग कम आत्मविश्वास छ जुन तपाईंलाई तपाईंले चाहनुभएको र हकदार जीवनबाट फिर्ता समातिरहेको छ?
कहिलेकाँही सबै ती लिने सही शब्दहरू हुन् त्यो परिवर्तन हुनका लागि।
तपाईंको लक्ष्य हासिल गर्न व्यक्तिगत विकास प्रयोग गर्दै
हामी प्रत्येकको आ-आफ्नै लक्ष्यहरू छन्; यो हामी कसरी महत्वपूर्ण हो तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न जान्छौं। एक तरीकाले तपाई यसो गर्न सक्नुहुनेछ व्यक्तिगत विकास योजना प्रयोग गरेर नक्शा बनाउन कसरी आफ्नो लक्ष्यहरु लाई हासिल गर्ने।
हामी पक्का छौं त्यहाँ धेरै उदाहरणहरू छन् जब तपाईंले सोच्नुहुन्छ "म मेरो लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छु, तर कसरी यसको बारेमा जान्ने छैन।"
हाम्रो पृष्ठहरूले प्रदर्शन र यी सिद्धान्तहरूलाई अभ्यासमा कसरी राख्ने भनेर वर्णन गर्दछ। जानकारी पढ्नु र प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई मनपर्दो जीवनशैली कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट दर्शन दिनेछ।
व्यक्तिगत विकास योजना के हो र तपाईंलाई व्यक्तिगत विकास योजना किन चाहिन्छ
धेरै सफल व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत विकास योजना प्रयोग गर्छन् चरणहरूको नक्शा बाहिर तिनीहरू प्रगति गर्न प्रयोग गर्दछ।
त्यसो भए के मतलब भनेको हो व्यक्तिगत विकास योजना (pdp)?
के तपाईंले कहिल्यै नमूना योजना वा टेम्प्लेट हेर्नुभयो? एक पटक सही उपकरणहरू संग सशस्त्र तपाईं आफ्नो कार्य योजना बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईंको चाहेको सफलता हासिल गर्नका लागि तपाईंको गाइडको रूपमा।
आत्म सुधार र सकारात्मक सोच
तपाईं आफ्नो प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न र जीवनको उत्तम मार्गको लागि उत्तम हो कि समायोजनहरू गर्न आत्म-सुधार प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
किनकि हामीलाई व्यक्तिगत विकासको महत्त्व थाहा छ, हामी तपाईंलाई खोज्न चाहन्छौं सिकाउने तरिकाहरू वा विधिहरू जुन तपाईंको ज्ञान विस्तार गर्दछ र तपाईंलाई तपाईंको जीवनको नियन्त्रण लिन अनुमति दिँदछ।
यो हुन सक्छ कि तपाईंले ती अतिरिक्त केही पाउन्डहरू गुमाउने निर्णय गर्नुभयो र कसरी सुरू गर्ने थाँहा छैन।
सहि वजन घटाउने कार्यक्रम फेला पार्न तपाईंलाई विश्वास र समर्थन तपाईंको छनौट लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ। पुरस्कार तपाइँको लागि त्यहाँ छन्।
एक पटक तपाईको व्यक्तिगत विकास के हो भनेर स्पष्ट भएपछि तपाईले सफलताका लागि सही उपकरण र श्रोतहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ:
सबै भन्दा राम्रो व्यक्तिगत विकास पुस्तक / ईबुक
आत्म सुधार र विश्वास ebook
व्यापार र क्यारियरको विकासमा व्यक्तिगत विकास के हो
व्यक्तिगत विकास व्यक्तिको रूपमा केवल हामीमा लागू हुँदैन। सब भन्दा सफल कम्पनीहरू ती हुन् जसले आफ्ना स्टाफको मूल्य र महत्त्व बुझ्दछन्।
व्यक्तिगत विकास क्यारियर विकास हो। क्यारियर विकास मा लगानी एक व्यक्ति को रूप मा दुबै आवश्यक छ र एक व्यापार महत्त्वपूर्ण छ।
विकास कोर्सहरू तपाईको स्टाफमा लगानी गर्ने उत्तम तरिका हो। तपाइँको कार्यबललाई विकास गर्ने अवसर दिनाले तपाइँको कर्मचारी र तपाइँको संगठन दुबैलाई फाइदा हुनेछ।
सञ्चार कौशल र व्यक्तित्व विकास एक कम्पनी को नीति को एक महत्वपूर्ण हिस्सा गठन। तिनीहरू यसको बृद्धि र स्टाफको संरक्षणका लागि आवश्यक अंश हुन्।
टीम निर्माण त्यस्तो चीज हो जुन कार्यस्थल भित्रका नतिजाहरूमा सुधार ल्याउन प्रमाणित भएको छ। तपाईंको व्यवसायलाई सफल बनाउनका लागि तपाईंको स्टाफको साथ संलग्न भारी मात्रामा महत्त्वपूर्ण छ।
हामीले प्रदान गरेका छौं व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू तपाईंको छनौट गरिएको क्षेत्रमा तपाईंलाई प्रेरित र प्रेरित गर्न।
सहि सल्लाहका साथ तपाईले आफ्नो जीवनशैलीको गुणस्तर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो क्षेत्रमा स्वास्थ्य, धन, तपाईको क्यारियर, सम्बन्ध र मित्रता।
हाम्रो पृष्ठहरूले प्रदर्शन र यी सिद्धान्तहरूलाई अभ्यासमा कसरी राख्ने भनेर वर्णन गर्दछ। उनीहरूले तपाईंलाई चाहेको जीवनशैली कसरी प्राप्त गर्ने भनेर कसरी जान्ने भन्नेबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिनेछ।
“प्रत्येक एक सेकेन्ड तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्ने अवसर हो।
किनकि कुनै पनि क्षणमा तपाईले महसुस गर्ने तरीका बदल्न सक्नुहुन्छ। "
यो हुन सक्छ कि तपाईंले ती अतिरिक्त केही पाउन्डहरू गुमाउने निर्णय गर्नुभयो र कसरी सुरू गर्ने थाँहा छैन। सहि वजन घटाउने कार्यक्रम फेला पार्न तपाईंलाई विश्वास र समर्थन तपाईंको छनौट लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ। पुरस्कार तपाइँको लागि त्यहाँ छन्।
एक पटक तपाईले व्यक्तिगत विकास के हो भनेर स्पष्ट गर्नुभयो, तपाई सफलताका लागि सही उपकरण र श्रोतहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
हामीले प्रदान गरेका छौं व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू तपाईंलाई सफल हुन मद्दत गर्न।
के तपाईं आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सहयोगको लागि सल्लाह खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसोभए सायद हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् 30० दिनको ईबुक तपाईलाई आफ्नो आवश्यकताहरूको पुन: आकलन गर्नका लागि उत्तम तरीका हो।
केही साधारण व्यक्तिगत विकास अभ्यासहरू पूरा गरेर, यस पुस्तकले तपाईंलाई तपाईंको भविष्यको नियन्त्रण लिन त्यो प्रारम्भिक कदम चाल्ने आत्मविश्वास दिनेछ।
हामी आशा गर्दछौं कि यस लेखले प्रेरित गर्यो तपाईं राम्रोको लागि तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न। 3o दिनको ई-बुकमा तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न वा ई-पाठ्यक्रमको सदस्यता लिनु भनेको तपाईंले लिनुहुने उत्तम निर्णयहरू मध्ये एक हुन सक्दछ।
तपाईं धेरै पाउन सक्नुहुन्छ प्रेरणादायक उद्धरण गर्दछ र भनाइ तपाइँलाई यहाँ निजी विकास क्याफेमा प्रेरित गर्न।
हामीलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईंसँग मनपर्दो व्यक्तिगत विकास उद्धरण छ जुन तपाईं अरूहरूसँग साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ। सल्लाह, सुझाव, प्रश्नहरू जुन तपाइँ उत्तर दिन चाहानुहुन्छ, उपयोगी लेख वा टिप्पणीहरू जुन अरूलाई सहयोगी हुनेछ - केवल हाम्रो फाराम पोस्ट गर्न वा शीर्षकमा जवाफ दिनको लागि।
पछिल्लोसर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत विकास पुस्तकहरू - सेल्फ हेल्प बेस्ट विक्रेता
अर्कोव्यक्तिगत विकास भिडियो के हो
फेब्रुअरी 4, 2018
ठूला लक्ष्यहरू सानो हिस्सामा तोड्नुहोस्